News - Site na ọganihu nke oge na mmepe nke sayensị na teknụzụ ……
Site n'ọganihu nke oge na mmepe nke sayensị na teknụzụ, mkpa ndị mmadụ maka akwa amalitela ịgbanwe, site na akwa akwa mbụ na akwa-mmiri na akwa akwa.
Akwa ụra dị mma bụ akwa nke na-eji nchikota ọtụtụ mbadamba akwa iji dozie elu nke isi na ụkwụ nke akwa ahụ ka ọ bụrụ nke ị ga-eji kwekọọ na akụkụ ahụ gị ruo oke oke ma weta ahụmịhe ụra.
Akwa ụra bụ ụdị akwa akwa nwere ọrụ ọgụgụ isi. Ọ bụ ụdị akwa eletrik. Ọ bụ akwa akwa eletriki nke na-eji nnukwu data na ihe mmetụta njikwa ihe mgbochi, mana akwa akwa eletrik adịchaghị mma. N'otu oge ahụ, akwa akwa bụkwa ngwaahịa na-eso usoro nke ezigbo ụlọ.
Kedu ụdị akwa bụ akwa akwa? Ọdịdị nke akwa a na-akpọ smart bed bụ otu ihe ahụ dịka akwa nkịtị, mana isi ime akwa ahụ dị iche. Mgbe mmadụ dina n’elu ihe ndina, a na-achịkọta bọọdụ na-achịkwa ihe, ihe ndina dị n’azụ na ụkwụ ji nwayọọ nwayọọ na-agbago. , Akwa akwa ahụ na-agbatị na ahụ mmadụ, ọ nweghịkwa mmetụta nke mfu n'úkwù. Enwekwara otutu uzo maka smart bed ịhọrọ site na. Nwere ike iji ọnọdụ TV maka ikiri TV, ọnọdụ PC maka kọmputa, na ọnọdụ nrụgide efu mgbe ị na-ehi ụra. Ọnọdụ nrụgide efu bụ iweli ụkwụ iji mepụta otu akụkụ, nke mere na ibu dị na obi nwere ike belata n'oge ụra.
A na-ejikwa akwa vibration na akwa nchekwa ụfụfụ ebe nchekwa, nke nwere nnukwu resili ma nwee ike iru akụkụ nke ahụ, nke mere na akụkụ ọ bụla nke ahụ nwere nkwado kwesịrị ekwesị.
1: Nlekọta ụra na-ehi ụra n'ime usoro a, ịdọ aka ná ntị oge mbụ banyere ọnọdụ ahụ ike
A na-akwadebe akwa ụra nwere ihe mmetụta dị ike na-enweghị kọntaktị, nke nwere ike nyochaa obi na ọgụgụ isi nyocha oge, ka ndị ọrụ wee mara nke ọma ụra ụra kwa ụbọchị na data ahụike.
2: Intelligent nchọpụta nke snoring, akpaka mgbochi nke aka
Ikwo ụra abụghị naanị ihe dị njọ, kamakwa ọ na - emetụta ogo ụra nke onye òtù ọlụlụ gị. Ọ bụrụhaala na onye ọrụ ahụ na-atụ egwu, akwa ụra ga-ewelite akuku azụ, na-enye onye ọrụ ohere iku ume nke ọma, si otú a na-enweta nsonaazụ nke ịkwụsị snoring ahụ. Mgbe snoring kwụsịrị, ọ ga-alaghachi na ọnọdụ mbụ ya na akpaghị aka. Usoro dum na-agbanwe nwayọ nwayọ ma ọ naghị emetụta ụra onye ọrụ na ụra.
3: APP oru ngo-edemede ọrụ, ka ị na-ehi ụra “ndammana teta”
Mberede na-eteta site na oti mkpu na ụtụtụ nwere ike ime ka ahụ erughị ala dị ka palpitation, ịda mbà n'obi, na-eche na-amụghị anya, wdg. Elekere anụ ahụ nke ihe ndina ahụ nwere ike ịchọpụta iku ume ma teta onye ọrụ ya n'oge kwesịrị ekwesị mgbe onye ọrụ nọ n'ụra ụra, nke na-adị mma karịa edemede nkịtị.
4: S keugwu usoro iji hụ na ala ụra ergonomic imewe
Akwa nwere ọgụgụ isi setịpụrụ isi ahụ 5 nkewapụtara na akwa akwa dịka ụkpụrụ ergonomics si dị. Site na ntanetị, enwere ike idozi akụkụ nke ihe ndina ahụ na uche ya, arụ ọrụ ahụ nwere ike imezi, enwere ike belata nrụgide olu.
5: Innovative environmentally friendly green ihe, efu nnukwu mpo sere n'elu ahụmahụ
Akwa ụra na-eji ụfụfụ ebe nchekwa, nke siri ike ma dị nro, nke na-enye nkwado na nkasi obi na ahụ ma na-eweta ahụmịhe ụra na-adịghị ala ala.
Ngwá ụlọ dị mma bụ ụlọ ọrụ na-emepụta nke ụlọ dị mma. Site na nkwalite na mgbasawanye nke ụlọ ahịa amamịghe, ụlọ ahịa ndị ahịa ga-eji nwayọ nwayọ. Enwetụbeghị ya na ike oriri nke ọmarịcha ụlọ ahịa ga-abụ nnukwu, yana ụlọ ọrụ nwere ọdịnihu dị mma.